क*रणी गर्दा गर्दै आमाले भेटेपछी एक युवालाई रामधु*लाइ,गाउँलेहरुले गरे नसोचेको खुलासा, अब के होला ? (भिडियो सहित) – Complete Nepali News Portal
छोरीलाई बलात्कार गर्दै गर्दा आमाले देखेपछि पिराले ती युवकलाई कुटेको र ढोका थुनेर बाहिर गाउलेलाई बोलाउन आमा निस्केपछी ती युवक ढोका फुटाएर फरार भएको आमाले बताइन । अहिले ती युवकलाई इलाका प्रहरी कार्यलय उर्लाबारीले नियन्त्रणमा लिएको उनले बताइन । के के भएको थियो त ? गाउलेहरु संग गरिएको कुराकानी तल भिडियोमा हेर्नुहोला ।